Nkọwa izizi gbasara Sọpụrụ 20 na 20 Pro agbapụtala | Androidsis
Edere nkọwa ndị mbụ gbasara Honor 20 na 20 Pro
Sọpụrụ ahapụbeghị anyị akụkọ n'ime afọ a. Akara ahụ ahapụla anyị V20, dị na Spain, n'agbanyeghị na e nwechaghị akụkọ gbasara ya. Mana nke a bụ ihe ga -agbanwe n'oge adịghị anya, dịka anyị nwere ike ịtụ anya ekwentị abụọ n'aka gị. Ọ bụ maka Sọpụrụ 20 na 20 Pro. Ụdị abụọ ga -abata n'oge adịghị anya.
Ihe izizi gbasara Sọpụrụ 20 na 20 Pro ndị a erutelarị anyị. Ekele dịrị ha anyị nwere ike nweta echiche nke ihe ika ga -ahapụrụ anyị na nke a. Na mgbakwunye, ekpughere ụbọchị mwepụta nke ekwentị ọhụrụ abụọ nke ika a.
N'ihe banyere Sọpụrụ 20, anyị ga -atụ anya a 6,1 inch size OLED panel. A ga -eji ọkwa dị ka mbadamba mmiri n'ime ya, na mgbakwunye na ijikọ ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo. A ga -etinye batrị ikike 3.650 mAh n'ime ekwentị. Ọ dị ka ọ ga -enwekwa nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Igwefoto ga -abụ otu ike nke ekwentị a. A ga -eji ihe mmetụta atọ, yana nnukwu ihe mmetụta nke 48 MP, oghere nke abụọ nke 20 MP na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke 8 MP. Yabụ na ọ bụ ngwakọta yiri ma ọ bụ nke sitere n'ike mmụọ nsọ na nke anyị hụworo na Nke a bụ ndepụta nke Huawei P30.
Banyere ụbọchị mmalite ya, ihe niile na -arụtụ aka n'eziokwu na Sọpụrụ 20 na 20 Pro ga -abata n'ọnwa Eprel. Ihe data ndị a na -egosi na ọ ga -abụ Eprel 25 ụbọchị ha ga -abata. Ya mere, ọ fọdụrụ ntakịrị ihe karịa izu abụọ tupu ụbọchị ahụ abịa. Tụkwasị na nke ahụ, ekpughere ọnụ ahịa ndị ahịa nwere ike ịpụta.
N'ihe banyere ọnụahịa, Sọpụrụ 20 ga -abata n'ụdị abụọ dị iche iche, RAM na nchekwa. Ọnụ ego otu n'ime ha ga -abụ ihe dịka euro 450 Na mgbanwe. Ezie na ụdị nwere 8/256 GB ga -abata naanị ihe karịrị euro 500. Anyị ga -echere ruo ngwụcha ọnwa iji hụ ma ndị a bụ ọnụ ahịa ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Edere nkọwa ndị mbụ gbasara Honor 20 na 20 Pro